အစောင့်ပေါ သော သရဲအိမ်ကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အစောင့်ပေါ သော သရဲအိမ်ကြီး
အစောင့်ပေါ သော သရဲအိမ်ကြီး
Posted by Khaing Khaing on Mar 8, 2012 in Copy/Paste, Creative Writing, Short Story | 27 comments
အခု ပြောမယ့် အိမ်ကြီးကတော့ ရန်ကုန်မြို့ လယ်ခေါင်မှာ ရှိတယ်ဆိုရင် အံ့သြစရာတေ့ာဖြစ်မယ်မထင်ပါ… ဒီအိမ်ကြီးအကြောင်းပြောချင်တာကြာပြီ ဒါပေမယ့် အခုတစ်လော ရွာထဲမှာ သရဲအကြောင်းပို့စ်တွေ အတင်များတယ်ပြောမှာစိုးလို့ ခဏလေး စောင့်နေတာပါ…ပြောရမယ်ဆို ဘဘကြီး ဦးမျိုးအောင်ကနေစခဲ့တာပါ…. ဘဘကြီးက နယ်တကာလှည့် တရားဟောတဲ့ ဓမ္မကထိကကြီးပါ တရားဟောရင်းနဲ့ ဘုရားတွေအဆူဆူအလှူခံရရှိခဲ့သလို ငွေသပြာတွေလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်…. ဘဘကြီးရရှိခဲ့တဲ့ ဘုရားတစ်ဆူအကြောင်းပြောပြချင်နေမိတယ်… အဲဘုရားကို ကျွန်မ တို့ကအခုချိန်ထိ ဆေးဘုရားလို့ပဲခေါ်ပါတယ်….ဆေးဘုရားမှာ ဘီလူးရုပ်ထု (4) ရုပ်ရယ် အလယ်မှာ မြတ်စွာဘုရားက ပလ္လင်ထက်မှာ စံပယ်နေပါတယ်….ဘီလူးရုပ်ထု (4) ရုပ်မှ 2ရုပ်က ပင့်ဆောင်လာစဉ်ကတည်းက ဦးခေါင်းတွေမပါလာခဲ့ဘူး….ဆေးဘုရားကို တောအထပ်ထပ် တောင်အထပ်ထပ်ကို ဖြတ်သန်းပင့်ဆောင်လာခဲ့စဉ် တစ်နေ့သောညနေမှာ မိုးချုပ်သွားသည့်အတွက် ရွာတွေမရောက်ခင် တောထဲမှာပဲ စခန်းချတည်းခိုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်…. ရှေးခေတ်အခါက အခုခေတ်လို ကားလမ်းတွေမပေါက်ရောက်ဘူးလေ ကုန်းတတန်ရေတတန် သွားခဲ့ရတဲ့အချိန်အခါမှာပေါ…သူခိုးဓါးပြတွေ ပေါတဲ့အချိန်လို့ပြောရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့လေ…ဘဘတို့အဖွဲ့ လာမယ့်သတင်းကို ဓားပြအဖွဲ့တွေက ကြိုတင်ရထားပြီးသား တောထဲမှာ တည်းခိုးစခန်းချနေသည်ကိုလည်းသိရော အကြိုက်တွေ့တော့တာပေါ့… ဒါပေသည့် မိုလင်းပြီး တစ်ခြားရွာကို ရောက်သည့်တိုင် ဘာဓားပြမှ အတိုက်မခံလိုက်ရဘူး… ဒါပေမယ့်ရွာထဲမှာ ပြောသံတွေကြားတာတော့ မနေ့ညက တောထဲမှာ ဓားပြမတိုက်လိုက်ရဘဲ တပ်ဆုပ်ခဲ့ရတယ်တဲ့… ဘဘကိုလာပြောရှာတယ် ရွာသူရွာသားများက ဘဘကလည်း ဘာပြုလုပ်တုံးလို့မေးတော့ ညကလေ ဘဘတို့ကိုဓားပြတိုက်ဖို့ တောထဲကိုသွားတာ လမ်းတ၀က်မှာ လူထွားထွားကြီး (4) ယောက်က တင်းပုပ်ကြီး ထမ်းပြီးသူတို့ကို တားတယ် မင်းတို့ရှေ့ဆက်သွားရင် ငါတို့အဆိုးမဆိုနဲ့လို့ပြောတယ် ဒီနောက်တော့ နောက်ထပ် 2ယောက်ကိုထပ်တွေ့ရပြန်ရော နောက်ထပ် လူထွားကြီး2ယောက်ကခေါင်းမပါဘူး ဒါနဲ့ ဓါးပြတွေလည်း ခေါင်းပြတ်ကြီးတွေကိုတွေ့တော့ပြေးကြကုန်ရောတဲ့… အဲဒါဘဘကြီးပြောပြတဲ့ ဆေးဘုရားက ဘီလူး (4)ကောင်အကြောင်းပါ….နောက်ပိုင်း ဘဘကြီးက သူတရားဟောလို့ရတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ဗိမာန်ကြီးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ခြံဝိုင်းကြီးတစ်ခြံကို ၀ယ်ခဲ့တယ်… အိမ်ကြီးကို ၀ယ်ပြီးပြီးချင်း ကုလားတစ်ယောက်ရယ် ဘုရားတစ်ဆူရယ်နဲ့ အိမ်စောင့်အနေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်…အဲမှာစတာပဲ ဇာတ်လမ်းက ကုလားက ဘုရားနဲ့ အိမ်အပေါ်ထပ်မှာ အိပ်နေတာ မိုးလဲလင်းရော အိမ်အောက်ကိုရောက်နေတယ် အဲကုလားလည်း ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးပြီး နောက်ဘယ်တော့မှ အိမ်အရိပ်ကိုတောင်မနင်းရဲတေ့ာဘူး ဒါက ဘဘကြီးဝယ်ထားတဲ့ အိမ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးအဖြစ်အပျက်ပါ.. ဘဘကြီးဆုံးပါးသွားပြီးနောက်ပိုင်း ဘဘကြီးရဲ့မိသားစုများက ထိုအိမ်တွင် ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့လေရာ …ထိုအိမ်ခြံဝန်းနှင့် ကျွန်မတို့အိမ်မှာ ကပ်လျက်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုမိသားစုများနှင့် ကျွန်မသည် သူငယ်ချင်းများဖြစ်ခဲ့ကြသဖြင့် ထိုအိမ်အကြောင်းကို အများထက် ကျွန်မပိုသိခွင့်ရခဲ့သည် ကိုယ့်တွေ့အဖြစ်အပျက်များလည်း ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသည် …သူရဲခြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နောက်မှ ကျွန်မနားလည်လာတယ်….1988 အရေးအခင်း ဖြစ်စဉ်အချိန်ကာလဖြစ်သည် ထိုအိမ်တွင်နေသူများက ရန်ကုန်တွင် အခြေအနေမကောင်းသောကြောင့် နယ်ဘက်တွင် သွားရောက်နေထိုင်ကြစဉ် ထိုအိမ်ကြီးကို မောင်တိုးကိုစောင့်ခိုင်းလေသည် မောင်တိုးသည် နည်းနည်းပွေသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ထိုအိမ်ကိုစောင့်စဉ် မကောင်းသောမိန်းမများကို ထိုအိမ်သို့ ခေါ်လာတတ်လေသည် တစ်နေ့ အိမ်နောက် ဂိုဒေါင်ထဲတွင် ထိုမကောင်းသောအမျိုးသမီးကိုခေါ်သွားလေရာ ဂိုဒေါင်တံခါးကို ဖွင့်လိုက်စဉ် ထိုမိန်းကလေးမှ စူးရှကျယ်လောင်သော အော်သံသည် ခြံဝန်းတစ်ခုလုံးသို့လွှမ်းသွားပြီး မိန်းကလေးခမျာ ကသောကရောပြေးထွက်လာလေသည် ခြံထိပ်ရောက်သောအခါ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများက မောင်တိုးဘာများလုပ်လိုက်သလဲ ၀ိုင်းမေးရာ ကိုတိုး ကိုတိုးဘာမှမလုပ်ပါဘူးရှင် ဟို..ဟို…ဂိုဒေါင်ထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ ဂျပန်ခေါင်းပြတ်ကြီးကို တွေ့လို့ ပြေးထွက်လာတာပါဟု… မိန်းကလေးခမျာ ကြောက်ရွံစွာပြောနေလေသည် အဲနောက်ပိုင်း မောင်တိုးလည်း မိန်းမရှုပ်သံမကြားရတော့ပါ…ကျွန်မတို့ကလေးဘ၀က ထိုအိမ်မှ သူများနှင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်တော့ သွားရောက်လည်ပတ်ဆော့ကစားလေ့ရှိသည် ကျောင်းပိတ်ရက်များဆိုလျှင် ထိုအိမ်မှာပင်အိပ်လိုက်တော့သည် ….. ကျွန်မတို့ငယ်စဉ်က တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလျှင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှလွှင့်သော မြန်မာကားများကိုသာ အားထားကြည့်ကြရေလေသည် တစ်နေ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အပြင်မှ အင်္ကျီအနီဝတ်ထားသော လူတစ်ယောက် ဆေးလိပ်သောက်ရင်းဖြတ်သွားတာကို ကျွန်မလှမ်းမြင်လိုက်လေသည် အပြင်သို့ပြေးလွှားထွက်ကြည့်တော့ မည်သူမျှမရှိ ….အိမ်ပေါ်တွင်လည်း လူလမ်းလျှောက်သံ တဒုံးဒုံးကြားရသဖြင့် အန်တီစိုးက သမီးရေ အိမ်ပေါ်မှာ သမီးသူငယ်ချင်းတွေ ဘာလုပ်နေလဲ တက်ကြည့်ပါကွယ်ပြောသဖြင့် ကျွန်မတက်ကြည့်ရာမည်သူ့ကိုမှ မတွေ့ရှိခဲ့ပေ…. ထိုညက သူငယ်ချင်းမလေးများဖြင့် အတူတူအိပ်ခဲ့လေသည် ကျွန်မတို့အိပ်သည့်အခန်းသည် ဘုရားခန်းခြေရင်းတွင်ဖြစ်သည် ကုတင်၏ ဘေးနှစ်ဘက်လုံးသည် ဘုရားခန်းအပေါက်ဝ နှစ်ခု၏ အလယ်တွင်ဖြစ်ရာ ကျွန်မသူငယ်ချင်းအိပ်သည့်ဘက်မှဘုရားခန်းသို့ဝင်ပြီးလျှင် ကျွန်မအိပ်သည့်ဘက်မှ ပြန်ထွက်လို့ရသည်ဘုရားခန်းတံခါးသည် 2ပေါက်ရှိသည် ညဘက်ရောက်ကျွန်မတို့ အိမ်မောကျနေချိန်တွင် ဘုရားခန်းမှ တဒုန်းဒုန်းနဲ့အသံသည် ကျွန်မနောက်ကျောဘက်မှ ဖြတ်လျှောက်သွားပြီး ဘုရားခန်းသို့ပြန်ဝင်သွားလေသည်….. နောက်ပိုင်း ထိုအိမ်မှ မိသားစုများနဲ့စကားစုပြောဖြစ်သောအခါတွင် ဆေးဘုရားမှ ဘီလူးရုပ်ထုများသည်အစောင့်သဘောနှင့် အိမ်ပေါ်ထပ်တွင် သွားလာနေကြောင်းသိရသည်…ထိုဆေးဘုရားဓာတ်ပုံလေးကို အချိန်ယူ၍ ကျွန်မသွားရိုက်ပြီ ရွာသူရွာသားများကို မျှဝေပေးပါဦးမည် ဆေးဘုရားသည် ကျွန်မတို့ကျန်းမာရေးမကောင်းချိန်ဖြစ်ဖြစ် အိမ်မသန့်ရှင်းလျှင်ဖြစ်ဖြစ် ဘုရားကို ရေသပ္ပာယ်ကာ သောက်လျှင် အိမ်သို့ဖျန်းလျှင် အန္တရာယ်ကင်းကြောင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရလေသည် ….နောက်ပိုင်းအခါအခွင့်သင့်ပါက ဘဘကြီးပင့်ဆောင်ခဲ့သော ဘုရားရုပ်ပွားတော် ဓာတ်ပုံများနှင့် ထိုအိမ်ကြီး၏ ဖြစ်စဉ် အကြောင်းများကို ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်……
ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေက မယုံကြည်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပါဘဲ တကယ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်………ကိုယ်တွေ့ကြုံဘူးသူများရဲ့ ဖြစ်ရပ်များကို ပြန်လည်ဝေမျှခြင်းအားဖြင့် အခြားအခြားသောသူများအတွက်လဲ ဗဟုသုတဖြစ်စေတာပေါ့ဗျာ………..ကောင်းပါတယ် အားပေးပါတယ် ခိုင်ခိုင်ရေ……….ဆက်ရေးပါဦး စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်နေပါတယ်
အဟွာနဲ့တွေ့မှ ဂျာပွန်ခေါင်းပြတ် ဖြစ်ရသလဲကွယ်…
မမဂီရေ အဲဒါက အိမ်မှာမကောင်းတာလုပ်ရင် အိမ်စောင့်တွေက မကြိုက်လို့ ပြတာကိုပြောချင်တာပါ…. ဘီလူးကနေ ဂျပန်ခေါင်းပြတ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးချင့်….
အဲ့ဒါ မကောင်းတာလုပ်တာမှ မီဟုတ်ရာဘဲ ကွယ်….
ကောင်းတာလုပ်တာပါ … အာဟိ …
ဟိုတယောက်လည်း ဆန္ဒပြည့်ဝ … ကန်မလေးလည်း ပိုက်ပိုက်ရ…
ဂလောက်ကောင်းတဲ့ ကိစ္စရပ်ကြီးကို …ဘာလို့
သူတို့မကြိုက်ရင် သူတို့ မီလုပ်နဲ့ပေါ့ ..ဟုတ်ဝူးလား …
ကွန်ဇာဗေးတစ် သရဲဒွေများ ..
သူတို့ကို ဆုံးမမယ့် …
ဒီမိုသရဲတွေ ဘယ်သွားအိပ်ပျော် နေတယ်မသိ…
ကျွန်တော့်ကို ခိုင်ခိုင်အိမ်အလည်ခေါ်ပါလား လိုက်ကြည့်ချင်လို့။
ပုံတင်ပေးပါ့မယ် အဲဘုရားက မီးမီးအိမ်မှာမဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်းအိမ်မှာပါ…. ကြည့်ရုံနဲ့မလိုက်လာပါဘူး…. မကောင်းတာလုပ်တဲ့ ဂီ(နူးပါဂိုဏ်ချုပ်)တို့လိုလူမျိုးဆီမှသာ လိုက်သွားမှာပါ…
ဘီလူနှုတ်ခမ်းမွေး…အဲ..အဲ.. ခေါင်းပြတ်နေတယ်ဆိုတော့.. ရှိတဲ့အမွေးပေါ့…
သူကြီးက ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေကို ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်…… ဒါတွေဟာ ဟိုး ဘုရားသခင်လက်ထပ်ကတည်းက ရှိခဲ့ကြပါတယ်…………ဒါကြောင့်လဲ ဘုရားရှိခိုး အမျှပေးဝေ ထဲမှာ မြင်အပ် မမြင်အပ် စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်း အမျှပေးဝေခြင်းပါ…… သူကြီးကိုယ်တွေ့မဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ ယုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ ဆိုလဲ တက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်.. ကလေးများလိုတော့ အတင်းမငြင်းချင်ပါဘူးဗျာ…………
ပို့စရာလား သူကြီး အဲဒါဘုရားကိုစောင့်နေတဲ့ ဘီလူးတွေ သူတို့ဘာသာအေးဆေးနေတာ သူကြီးက ဘာလို့ စီးပွားရှာချင်တာတုန်းချင့်…လုပ်ချင်ရင် ဒသဂီရီ (ခေါ်)အင်ဇာဂီ (နူးဘားဂိုဏ်းချုပ်ရှိတယ်) သူ့ခေါင်းသာတောင်း…. အယကားစတာနော် သူကြီး (မိဂီမလေသံကိုအတိုးခိုးခြင်း) အဟိ…..
မခိုင်ရေ အဲဒီအိမ် ကြီးဆိုတာ ရွှေဂုံတိုင် ကအိမ်ကိုပြောတာလား ။ အခုကောရှိသေးရဲ့လား။
ညီမလေးအဖြေက နည်းနည်းတော့နီးစပ်ပါတယ်ကွယ် အခုတော့အဲဒီအိမ်ကြီးမရှိတော့ပါဘူး… အဲဒီအိမ်ကြီးဖျက်လိုက်တာ မမတောင်မသိလိုက်ဘူးကွယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီ အိမ်ကြီးဖျက်တုန်းက အဲမှာရှိတဲ့အစောင့်တွေက မမကိုအိပ်မက်ပေးတယ်ကွဲ့…သူတို့နေရာစရာမရှိတော့လို့တဲ့ မမတောင် သူတို့ အတွက် နေရာတစ်ခုအလှူလုပ်ပေးလိုက်သေးတယ်….
သူကြီးက ဒီလိုမျိုးတွေကို ယုံကြည်မှုမရှိဆိုတာ
အချို့က လွန်လွန်ကြူးကြူး ချဲ့ပြောကြတာတွေကြောင့် ဖြစ်မှာပါ…
ဒါနဲ့စကားအတင်းစပ်(MG ရွာသုံးစကား)မြတ်ရွှေတိဂုံမှာ Post မှာ
သူကြီး နဲ့ ခိုင်ခိုင်အတွက် လက်ဆောင်လေး ရှိတယ်…
ယုံဝူးဂျ ကိုဂီပြောသလို သရဲဆိုရင်တောင် ကွန်ဆာဗေးတစ်သရဲပဲဖြစ်ရမယ်
မခိုင်ပြောသလိုပါပဲ အဲ့လိုအဖြစ်တွေရှိပါတယ်၊ ကျနော်တို့နားက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆို အရက်သောက်တဲ့လူ ကျောင်းပေါ်လာအိပ်ရင် ဘုရားထဲက အစောင့်ဘီးလူးက ထွက်လာပြီး ကျောင်းပြင်ကို ဆွဲချသွားလို့ အရက်သောက်တဲ့လူဆို အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းက ဘုရားရှေ့မှာ မအိပ်ရဲဘူး၊
ကျုပ်တို့ရွာရဲ့ စီးပွားရေး သဂျီးမင်း မယုံပေမယ့် တကယ် ရှိပါတယ် …
ကျုပ် ကိုယ်တွေ့လည်း ရှိတယ် …
အခြားသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေလည်း အများသားကလား …
ကဲ … သဂျီးရေ …
မယုံရင် ပုံပြင်သာ မှတ်တော့ဗျို့ …
ကျုပ်ကတော့ ယုံသဗျို့ ………
ကျုပ်က ဒီလိုမျိုး အကြောင်းတွေဆို အများကြီး စိတ်ဝင်စားတာဗျ …….
မမခိုင်ခိုင်ရေ ဟဝှာကြိုက်သူ ငတိုးတော့လုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့
တော်တော်ဆိုးတဲ့ သရဲ အဲ ဟုတ်ဘူး ဘီလူးကြီး (ရွာထဲကလားမသိဘူး) မောင်တိုးတော့ ဘာမှ မလုပ်ဘဲ ကောင်မလေးကို ဂျပန်ခေါင်းပြတ် ပြလွှတ်တယ် … ကောင်မလေးက လည်းကြောက်လို့ဘဲ ဘယ်လို ကနေ ဂျပန် ခေါင်းပြတ်ကြီးမှန်း သိသွားတာလည်း မသိဘူး ။ ခေါင်းပြတ်ကြီးက ပြောလိုက်တာလားဟင် … ငါ ဂျပန်ခေါင်း လို့ .. …. :grin: :grin:
ဖြိုပစ်လိုက်တာလည်းဆိုးတယ် ..နို့မို့ဆို နိုင်ငံခြားသားတွေကို သရဲခြောက်သော ဟိုတယ် ဆိုပြီး ငှားစားရမှာ.. နာတာကွာ .. Discovery ကကောင်တွေ ခေါ်ပြီး မှတ်တမ်းရိုက်ပြီး ပြခိုင်းရမှာ…
ဟို ပါးရိုက်တဲ့ ဂျပန်ကောင် အဲ့ဒီ့ သွားခိုင်းပြီး ဂျပန်ခေါင်းပြတ် ပါးသွားရိုက်ခိုင်းရမှာ ..ခွီ. ခွိ…. :grin:
ko 22 says:
သရဲတစ်ကယ်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ် . မမြင်ဘူးသေးပါ . ဒါပေမဲ့ အသိဆရာဝန်တစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ်တွေ့ကြုံတာပြောဘူးတယ်. ခွဲစိတ်နေတုန်း မျက်မှန်ကျနေတာကိုသရဲက ပြန်တင်တာ ကူပြီးလုပ်ပေးသွားတာကြုံဘူးတယ်တဲ့ . ဆေးရုံနံမည် ထည့်မပြောလိုပါ . တစ်ချို့ ကကြောက်မှာဆိုးလို့ ပါ
သဂျီးကတော့ …ယူအက်စ်အာမီ ကို ပြစားဖို့
စောင့်ပေးတယ်တဲ့ …..ဟိဟိဟ …
ဆြာဂျီးက ရုပ်ပွားတော်ကြီး ပင့်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှ
ငတုံး ဘီလူး …
စိတ်မနှံ့တဲ့ ဘီလူး …
ဟုတ်တယ်လေ… လုံလုံခြုံခြုံ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေတဲ့
ရုပ်တု ကိုဆက်စောင့်နေဒယ် …
တခြား လိုတဲ့ ဟာတွေကျ မလုပ်ပေး ဘူး…
လေဒီ အန္တရာယ်ကင်းဖို့ …
ဖို့ … .ဖို့ …..
ဒဂိုး အိတ်ထိပါတ် ရှိတယ်ဆို…
တန်တော့ ..မျိုးချစ်စိတ်မရှိတာကို ထောက်ရှုရင်…
ဘီလူးက ဘိရုမာ ဘီလူး ဖြစ်ပုံမရဘူး
အနှီ ဘီလူး သရဲ ဆိုဒါတွေကို
ဒက်ဂလောက် ….ဒက်ဂလောက် ….
ဘုရားတောင် ဆေးဘုရား တဲ့ …
အံ့ရော အံ့ရော …
ရှေးလူဂျီးတွေများ …ဘုရားတောင် ဘရန်းဒင်း ယူလုပ်ရက်ကြတယ်…
>> ဆေးဘုရားသည် ကျွန်မတို့ကျန်းမာရေးမကောင်းချိန်ဖြစ်ဖြစ် အိမ်မသန့်ရှင်းလျှင်ဖြစ်ဖြစ် ဘုရားကို
>> ရေသပ္ပာယ်ကာ သောက်လျှင် အိမ်သို့ဖျန်းလျှင် အန္တရာယ်ကင်းကြောင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရလေသည်
ဖုန်တွေဘာတွေ တင်နေတာ ရေဖျန်းပီး သောက်မိမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်မယ်…
သူများသာ သွားပြီး မဟာယာနတွေ ဇိမ် ဘာတွေ ပြောနေကြတာ…
ကိုယ်တွေကျတော့ရော ….အင်း ….
ဂယ်က ဇာတ်လမ်းလေးက ဒီလိုဖြစ်မယ်ဗျ….
ကွန်ဇာဗေးတစ်ဗ် … ဆေးဆြာဂျီး တစ်ယောက် (အော်)
အနည်းဆုံးတော့ …သီလသမာဓိ သိက္ခာ နဲ့ပြည့်စုံမယ်ပေါ့ …
သူတည်ခဲ့ ထုခဲ့တဲ့ (စီရင်ခဲ့တဲ့)ဘုရား ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာ ….
ဘယ်လိုနတ္ခက် အချိန်အခါ အစီအရင် (လောကီ နည်းတွေပေါ့ဗျာ..)
နဲ့ စီရင်ခဲ့မယ်ပေါ့ ….
သည်တော့ သည်သတ္တိတွေကိန်းပြီး ဘုရားက ဆေးဖက်ပဲ ၀င်သလိုလို
ဖြစ်နေသပေါ့ …. နှစ်ကြာလာတော့ ဆေးဘုရား ဆိုပြီး တွင်လာသပေါ့…
ဒါ ကိုဘရန်းဒင်း လုပ်တာဗျ …ကိုယ့် အစွမ်းကို ဘုရား ဆိုတဲ့ ဘရန်း
ကတဆင့် အရောင်ပိုထွက်အောင် လုပ်ယူတာ …
ဘရန်းဒင်းသရူးရီလီဂျင် ဆိုတာ သိပ် အကုသိုလ်ကြီးတယ်…
၀ိုင်းဆဲ ကြတော့မယ် ထင်ပါ့ ….
ကံဆိုတာ အလုပ်ဆို …..မာတုကာမဂျီးရဲ့ ….
အင်ဂျင်နီယာ ဘုရားတို့ မန်းနေ့ခ်ျမန့်ဘုရား တို့ရော မရှိဝူးလားဟင်င်င်င်
ဆေးဘုရားတောင် ရှိမှတော့ ရှိသင့်တာပေါ့နော….
ဖိလစ်ကော်တလာ လို့ ခေါ်တယ်…
ဘုရားသိက္ခာကျအောင် မလုပ်ကြပါနဲ့ ကွယ်တို့….
ရေတပုလင်း ပို့ပေးပါ။ သဂျီးကို တိုက်မလို့.. မသောက်ရင် သူ့ကိုအတင်းချုပ်ပြီး ပါးစပ်ဖြဲတိုက်မယ်။
ဟဲ ဂီနဲ့ သူကြီးဆေးလှုပ်သောက်ခိုင်းလိုက်စမ်း။ ဒင်းတို့စိတ်သိပ်မငြိမ်ဘူး။ ပြောချင်ရတွေ တောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့။ မူမမှန်ဘူး။
၃၁ ဘုံက ဝေမာနိက ပြိတ္တာအနွယ်ဝင်ပဲလား